हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनबाट निम्तिन सक्छ रोग, जन्नुस कसरि - ज्ञानविज्ञान
हामीले पकाउने भाँडा वर्तन, खाना पस्कने थाल आदि कुन धातुले बनेको हो ? कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने कुराले स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्छ । सामान्यतः हामी स्टील, एल्मुनियम, कपर, फलाम, सिसा, ननिस्टिक आदिको प्रयोग गर्छौ । हामीले हेक्का नराखेको कुरा हुनसक्छ, हामीले प्रयोग गर्ने भाँडावर्तनको सोझो असर हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्छ ।
यो एकदमै लोकपि्रय छ । किनभने यसको प्रयोग एकदमै सजिलो छ । हल्का हुन्छ । सफा गर्न पनि सहज हुन्छ । तर, केहि अध्ययनले बताएको छ कि, कतिपय अवस्थामा यो रोग पनि कारण बन्न सक्छ ।
– यो अहिले निकै लोकपि्रय छ । तर, यसको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैन ।
– अहिले सिलिकन कुकवेयर पनि निकै लोकपि्रय छ । खासमा यो सिन्थेटिक रब हो, जसमा बान्डेड सिलिकिन -प्राकृतिक तत्व, जो ढुंगामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ) र अक्सिजन हुन्छ ।
Topics #एल्मुनियम #प्लाष्टिक #भाँडाबर्तन #रोग
Don't Miss it यस्ता छन्, अनुहारमा नरिवलको पानी लगाउँदा हुने फाइदा
Up Next सौन्दर्य सामग्री प्रयोग खतरनाक पनि हुन सक्छन्
काखी गनाउने समस्या छ ? यस्तो छ सजिलो घरेलु उपचार
काखी गनाउने समस्या एउटा आम समस्या हो । बिशेष गर्मी याममा यो समस्याले पीडित बनाउने गर्दछ भने, साथी भाई नजिक…